Kukwira mai zvose nemwana – Vanoda Zvinhu
Ndakati ndiri kubasa ndokutaura nemumwe musikana kuti ndainge ndabaiwa nehosha.
Grace ndokubva ati aah panext door pangu pane umwe mumvana kana uchida zvema one night stand.Akandipa nhamba dzemumvana uya.Ndichisvika kumba ndakashandisa landline kufona ndichizvijurujusa.Babe rakati noproblem svika hako wakasununguka.
Ndakarova quick bath ndokuposhera kaperfume kaYou arethe fire ndokunanga matunhu.Ndichisvika ndakawana babe rakagara pavheranda ndokutambirwa ndokupinda muden.Mainge munemwanasikana achibika.It was a single room.Mwana ainge akapfeka a short dress makumbo akaita fanta wanzwa here.Tirikuita nyaya kudaro ndaiyeva getsi
romwana raibika richikotama kotama.
Momz vakazviona zvikanzi wanakidzwa ka.Apa blazo vakanga vatomira shaz.Momz vakandikwevera kumubhedha
vachibva vati saka wandivigirei.Vakavhara keteni raivapo.Takatanga kutamba momz vachichemerera.Musikan kuseri kweketeni achingoyuwira
Ndakanzwa momz voti ndisvire mhani haana basa uyu.Mboro yakanga yadinya kuita danda.Ndakavhura zip ndokuvhomora muchinda,ndakasumudza skirt yamomz ndokukwevera g-string padivi ndokuroverera nyoro
chaiyo.Momz vakaridza kamhere uku mwanasikana ndakanzwa achifemera pamusoro kuseri kweketeni zvairadzidza kuti pamwe ainge apinza ruoko mupant yake achitamba nematinji:
Momz nyini yavo yaidziya zvokuti huya uone.Nhasi zvangu ndinobvarurwa chibereko ndakanzwa odero.Ndavapomba vakafongora kudaro ndikanzwa voti ndakutunda ndakutunda.Kunzwa kudaro ndakanzwa machende achidaira ndokutunda guchu rovuronyo mukati mebeche mberi mberi.Takawira tose pamubhedha tichifemedzeka.I then disengaged from her.
Heya mboro inonaka kudai vakadaro momz.Handisati ndambotunda kudai muupenyu.Imba yose yakanga yongonhuhwa kusvirana.Momz vakatanga kuseka.Wandisvira ndikatunda Gillian achihwa vakadaro momz.Sokuona
kwangu takatunda nguva imwechete naGillian.
Gillian akazoti mhamha nhasi ndorara kupi.
Momz vakati unowadza pasi wovata.Takazodya sadza kunze kwainge kwatovira,apa Gillian aingondisvorera ini ndichikanda vo ziso.Makumbo edu aigumhana pazasi petafura.Ndakasumudza gumbo ndokukwidza negumbo
rake ndikasvika mukati meskirt yake yainge iripfupi kwazvo.Iye ainge atovhura makumbo.Ndakapinza gumbo mukati ndichisvikirira kupant.Iye fidgited achitevera gumbo rangu.
Zigumwe ziguru rakandogumha nyini ndokunzwa kuti shuwa mwana watota.Chaiva churu chebeche rairatidza
kuti rinematinji marefu.Tapedza kudya momz vakati kunaGillian,achiwadza nokuti vainge voda kuvata.Vakabuda panze tikasara tirivaviri naG.Akandikumbira kuti ndisunde table ipapo ndopo patakagumanha ndichibva ndamurova garo
Akasekerera ndokubva ndati zvangu zvaita.Ndakamukwevera mudhuze ndokumupa kiss refu ndichipinza ruoko muskirt ndichitsvaka beche.Ndakapinza chigumwe mukati ndokunzwa chichigaka asi matinji waiva nawo zveshuwa.I was the luckiest man on earth.Ndakazonzwa G oti chiregai mhamha vavakudzoka.Ndakanzwa tsoka dzavo panze ndokubva ndandogara pamubedha.Momz vakapinda ndokuringa ringa zvikanzi ko iwe hausati wawadza nanhasi?G akatora machira aiva pamusoro pewardrobe ndokuwadza.Momz vainge vatoti zvavo pamubhedha wavo shadabu vakavhura makumbo. G akagadzira curtain ndokubva azvivharira hake kuseri asi tainge tachonyana.
Ndakakatanura hazu dzose ndokusara ndiri musvo.Momz vakabvisa dzavo ndokubva tasangana pabonde.Mboro yainge danda ende yaivhutira.Handina kupedza nguva ndakaibaira pamukova ivo ndokuitevera ichibva yati svata
yose.Vakatura befu zvikanzi nhasi hangu,ndovurawa.Ndafamba navo zvinyoro nyoro ivondokuvhura makumbo.Mai vanovhura gumbo ivavo.Hapana chinhu chakandifadza kunze kwemavhuriro avo amakumbo.Mubhedha
wakatanga kuti tsviki tsviki ndikaziva kuti Gillian nhasi achatunda rusingaperi achinzwa mai vachichema nokunakirwa.
Pasina nguva ndakanzwa momz votunda vachiita somunhu wotandadza.Ndakatevera sure kwaGillian
wandaknzwa achiti oh my god nezeve zeve,ndakabva ndapinda mu overdrive ndokutunda gallon revuronyo mukati mamai vake. Takamboti ziii hana dzichirova.Apa mboro haina kuvata.Momz vakazoti mboro inonaka
iyi.Kubva nhasi hauna kwaunoenda.
Ndakakwenya mhuno nekasiyanwa ndikaziva kuti Gillian aizvinzwa nokuti aishanyarika shanyarika.Momz ndakavapamha yetatu round yakareba.Vakachema vakazvirega uku mwana hope dzingauya.Yetatu iyi rakabva rava jekiseni rehope because patainge totaura masweet nothings after a heavy bout of s.ex,ndakazongonzwa dzava ngonono.
Apa ini blambi vainge vakamira chipikiri mwana.Momz vainge vavamugear rehope ndokubva ndati nezevezeve,Gillian.Akaita seari kubva kuhope zvikanzi Hi hee.Ndikati momz vavata.Haana kupindura,saka ndakamuka ndokupfeka bhuruku ndokuita somunhu anonzwa weti kubuda panze.Uyu G pandaibuda
akandikava zveune achivhura sinhi rose.
Maiva murima asi ndakaona kuti ainge atobvisa pant.Ndakandoweta mboro ichivhutira.Ndadzoka ndakakotama ndokutsvangadzira paainge akavata ndiye mahwekwe nebeche nyoro.Ndakaramba ndichitsvaka ndichida kunzwa dinji.Pandakangoriwana muromo wakabva watevera ipapo.
Next story Kukwira mai zvose nemwana Part 2
Previous story Nzara ye bonde yakandipinza mu statutory rape !!!